Ahoana no hanampiana SEO amin'ny tranokalan'ny SEO?
Amin'izao fotoana izao, saika ny olon-drehetra mitantana tranonkala ara-barotra dia mahomby amin'ny famokarana fivarotana vokatra na serivisy amin'ny serivisy ao amin'ny Internet. Nanjary nalaina izany noho ny hery ambony tao amin'ny tranonkala, ka nahafahan'ny mpandraharaha an-tserasera an-tapitrisany ny mpanjifa an-tapitrisany eran-tany. Ary ny firesahana ireo mpihaino marobe manerana ny sisintaniny dia mila ilainao mba hampidirana SEO amin'ny tranonkala SEO (na SEO hafa) - wohungssuche.
Amin'izany fomba izany, dia mety ho lasa haingana kokoa noho ny SEO eo an-toerana voafaritra mazava tsara ny fampiasana fanamafisana ny safidy Search Engine amin'ny fiteny maro (iraisam-pirenena). Tsy ny filazana fa rehefa manampy ny SEO iraisam-pirenena ianao dia manokatra varavarana ho an'ireo tsy hita isa amin'ny fomba maro samihafa amin'ny tetikasanao an-tserasera (indrindra raha ampitahaina amin'ny asa ara-barotra nentim-paharazana). Raha raisina ho toy izany dia ilaina ny manampy ny SEO amin'ny tranokalam-pifandraisana izay mamela azy hivoaka sy hotsaraina amin'ny mpihaino maneran-tany, vao haingana izay mety ho an'ny tompona orinasa an-tserasera, vonona sy vonona ho amin'ny fahombiazana tena goavana.
Voalohany indrindra, alohan'ny ahafahanao mandray fanapahan-kevitra voaomana tsara hampidirana ny SEO amin'ny tranonkala iraisam-pirenena, dia mila mametraka ny tenanao ianao amin'ny maha-mpitarika manana ny tambin-tsena sasany. Raha vantany vao vita ny tetik'asa vaovao dia ity no tanjona voalohany amin'ny fiteny iray, ny zavatra manaraka atao dia alefa mankany amin'ny mpihaino marim-pototra vitsivitsy any amin'ny firenena hafa. Toa manomboka amin'ny fandikana ny tranonkalanao amin'ny fiteny faharoa sy fahatelo io dingana io, raha mitadidy fa ilaina ny manampy SEO amin'ny vohikala amin'ny isa maromaro isan-karazany. Noho izany, andeha isika hijery ny dingana tsikelikely.
Zavatra iray amin'ny fotoana iray
Matetika ireo orinasa dia miezaka manomboka ny tranonkala amin'ny fiteny maro manomboka amin'ny voalohany. Raha heverinao fa manana teti-bola tena lehibe ho an'ny vanim-potoana fanombohana ianao, dia toa mazava ny hevitra. Nefa tonga ny fampitandremana. Ala sary an-tsaina, nahavita nanangona tranokala iray izahay izay naseho teo an-tampon'ireo pejy solontenan'ny karoka (SERP), ohatra amin'ny teny Anglisy. Ary misy antoka ve fa ny fandikan-tenintsika vahiny, ohatra, dia adika amin'ny teny Espaniôla na Alemana, mba hanao azy ihany koa? Tsy mieritreritra aho. Noho izany, rahoviana isika no tokony hanomboka fanitarana amin'ny fiteny maro samihafa? Mino aho fa ny fotoana tsara indrindra dia efa nomaninao taloha ary nahasakana tranonkala nahomby tamin'ny teny Anglisy:
Manaova modely amin'ny tranonkala fandraharahana amin'ny teny anglisy
Ataovy ny zo Mifantoha amin'ny rafitra CMS sy tranokala vohikala
Mahaiza mandanjalanja mba hanomboka fiteny tokana tokana amin'ny fotoana iray (manao izany, dia hanana fotoana ampy hanampiana ny SEO amin'ny tranonkala amin'io fiteny io ianao, ary noho izany dia mahazo ny laharana manokana (SERPs alohan'ny hidirana ao amin'ny ambaratonga manaraka).
Mitadiava fikarohana teny fototra mety ho an'ny fiteny tariby tsirairay izay kasainao hampidirina (toy izany, tsy misy afa-tsy ireo teny manan-danja manan-danja manana traikefa goavana,
Ny dikan-dikan-dikan-teny vaovao rehetra ao amin'ny tranokalanao dia tsy maintsy ahitana farafaharatsiny amin'ny pejy bilaogy, na ny votoatiny hafa azo atao (ataovy izany haingana araka izay tratra, amin'ny fanandratana ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fanentanana tranonkala fanoratana amin'ny fiteny maro)
Contrôle double check OL amin'ny zava-drehetra
Mandeha amin'ny fiteny maro, tokony handinika ny fananana tambazotra Content Management System (CMS). Tsy mila mikarakara antontan-kevitra maromaro isan-karazany aho, satria mampirisika ny hitazona ny CMS ihany aho handika ny votoatinao voasoratra hatrany. Maro ireo Content Management System manerantany mamela anao hamorona tranonkala maro amin'ny fiteny samihafa mizara tahiry tokana. Ankoatr'ireo hafa dia manolotra ny iray amin'ireto manaraka ireto aho: Joomla, Magento, WordPress, na Drupal. Amin'izany fomba izany, afaka manana tombony tsara ianao, toy izao manaraka izao:
fametrahana habaka fampiantranoana, miaraka amin'ny fandaniam-bola fandefasana mora kokoa (fahatsiarovana, Google dia tsy mampiova ny toerana misy anao, satria ny motera fikarohana dia mampiasa famantarana hafa
fihenam-bidy tsara amin'ny dikan-teny samihafa na tranokala maro
fanavaozana lehibe ho an'ny tranokala rehetra miaraka amin'ny fotoana iray, raha tokony handamina ny fanavaozana na ny fampivoarana ho an'ny iray monja
Manoro hevitra aho raha mieritreritra ireto safidy manaraka ireto hananganana ny tranonkalan'ny tranonkalanao:
domains ambony indrindra amin'ny firenena (ohatra.
Ny sehatra iraisam-pirenena rehetra dia tokony hanana ampahany betsaka
Sub-folders tonga manerana ny sehatra iraisam-pirenena
Diniho ny mari-pamantarana URL
Fanaraha-maso ny fiteny amin'ny cookies
Raha ny amiko, ny safidy avy amin'ny firenena nomena ny code mba hanampy ny SEO amin'ny tranonkala dia manana tombony maro. Ny fananana ny geotargeting an'ny firenena dia tsara ho an'ny marika, satria ny mpampiasa rehetra dia haverina avy hatrany, fa ny raharaham-barotra iraisam-pirenena dia tena manan-danja mba hifantohana amin'ny toe-javatra tsirairay manokana. Raha ny marina, ny anaran'ny sehatra manan-danja amin'ny teny fanalahidy dia mora voadika ho an'ny firenena tsirairay mba hanao fampiroboroboana amin'ny aterineto ho an'ny vokatra fototra na ny serivisy na dia mifantoka bebe kokoa aza (mariho fa ity safidy ity dia tsy hanao, raha toa ianao ka miady amin'ny faritra maromaro izay efa mifantoka amin'ny teny fanalahidy tokana na fehezanteny tokana).
Ny sisa amin'ireo fanavaozana eran-tany izay efa nampiasako ny SEO amin'ny tranonkalan'ny ahy.
Lehibe ny CMS iray isaky ny daty. Na izany aza dia mbola mendrika ny manamarina raha marina tsara ny fametrahana azy manontolo. Amin'izany fomba izany, azonao atao ny mampiasa hetsikana hreflang milaza ny Google izay fiteny (fa tsy firenena) fa ny pejy Internet tsirairay dia voasoratra ao.
Raha heverinao manokana ny fandikan-teny sasany, indrindra mikasika ny fitsipi-pitenenana tsy misy dikany ankasitrahan'i Google, dia tokony ampiasao fotsiny ny fitsipi-pitenenana diso indrindra amin'ny sehatra rehetra amin'ny tranonkalanao. Saingy nahavariana lalina kokoa ny fahitako fa mety ho tsinontsinoavina ny fitsipiky ny fitsipi-pitenenana, raha te hahazo fanatsarana ara-teknika. Midika izany fa maro amin'ireo tranonkala manana lisansa avo lenta no matetika mampiasa teny voadika amin'ny teny gramma na fehezanteny, izay manaporofo fa tena ilaina sy mifanentana tsara. Noho izany, manoro hevitra aho manaraka fitsipika henjana momba ny fitsipika hentitra momba ny fehintsoratra fohifohy, ary na aiza na aiza. Tsarovy fa raha ny Metadata, ny URL, ary ny Anchor dia azonao atao ny manisy fanamafisana manokana ny sora-pitenenana azo itokisana afa-tsy ny fitsipi-pitenenany.
Farafaharatsiny, te-hanasongadiko izany indray aho - amin'ny fampiasana fandikan-teny amin'ny ankapobeny dia mandefitra matetika ireo singa manan-danja ireo no fomba ratsy indrindra hanampiana ny SEO amin'ny tranonkala. Mba hanatontosana fikarohana iraisampirenena tena tsara ho an'ny fikarohana amin'ny fiteny roa, manoro hevitra aho fa hanana fandikan-teny marina fotsiny, izay ahitana ny fananganana rohy feno sy ny fikarohana lalindalina lalindalina kokoa. Ary aza misalasala manandrana mandika fiteny maro atsy ho atsy, satria ny tontolon'ny orinasa iraisam-pirenena dia mila manao zavatra hatrany, zavatra iray hafa.